NATO oo la socon doonto xaaladda Ukraine - BBC Somali - Warar
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 11 Maarso, 2014, 23:36 GMT 02:36 SGA
Qaar ka mid ah Ciidamada Ruushka ee jooga gobolka Crimea ee dalka Ukraine
Gaashaanbuurta NATO ayaa sheegaysa in diyaaradaha wax basaasa ee aan duuliyaha la hayn ay u diri doonto Poland iyo Romania, tallaabadaasi oo qayb ka ah dedaalada lagula soconaya xaaladda dalka Ukraine.
Diyaaradahaasi ayaa laga billaabo maalinta talaadada ah waxa ay ka duuli doonaan saldhigyo ku yaala Jarmalka iyo Britain.
Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa markii shanaad ka kulmay mushaakilka ka aloosan dalka Ukraine muddo toban maalmood godahood ah.
Safiirka Britain u fadhiya Qaramada Midoobey Mark Lyall Grant ayaa sheegay in aftida la qorsheynaya in maalinta axadda ah loo qaado mustaqbalka gobolka Crimea ay noqoneyso mid sharci darro ah maadaama aysan noqon doonin mid xor iyo xalaal ah.
Waxa uu intaasi ku daray in intabadan xubnaha golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey oo uu ka mid tahay Shiinaha oo intabadan xulufo la ah Ruushka ay hoosta ka xariiqeen muhiimadda ilaalinta madaxbannaanida dhuleed ee Ukraine.
Maalmo ka hor ayaa Ruushka waxa uu ciidamo ku soo daadiyay gobolka Crimea, waxana tallaabadaasi ka dhashay cambaarayn caalami ah oo dalalka reer galbeedka u soo jeediyeen Ruushka.
Mareykanka ayaa kal hore ka digay xad gudub lagu sameeya madaxbannaanida dhuleed ee dalka Ukraine.
Siyaasadda Xamas: Kuma degdegeyno xabbad joojin
UN oo ku baaqday xabad joojin deg deg ah
28 Luulyo 2014
Ciida oo loo diyaar garoobayo 28 Luulyo 2014
Israa'il oo qiratay weerkii xarunta QM